စျေးကွက်ယူလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုမှာ browser ကိုအင်္ဂါရပ်! | Martech Zone
စျေးကွက်ယူလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုမှာ browser ကိုအင်္ဂါရပ်!
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 18, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ယနေ့ညအစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အားသင်အားလုံးကိုပြချင်သောလင့်ခ်များစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကနံပါတ် ၁၀ ကိုတောင်ထိပ်မှာ ၁၀ ထားချင်တယ်။
ငါသိမ်းဆည်းထားသော bookmarks များကိုလေ့လာပြီးသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို ခံရ၍ သင်ရှုပ်ထွေးစေမည့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်လိမ္မာပါးနပ်သောဖော်ပြချက်အချို့ကိုရေးသားခဲ့သည်။ link တစ်ခုချင်းစီပြီးသွားရင် tab အသစ်တစ်ခုကိုငါဖွင့်လိုက်တယ် (firefox ကိုသုံးတယ်)၊ ငါ့ bookmarks ကိုသွားပြီး link ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ သငျသညျပြီးသားနောက်ဖြစ်ပျက်ကိုသိပေလိမ့်မည်။ ငါသည်ငါ့ bookmark ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ငါ့ post ကို 90% ပြီးစီးခဲ့ရှိရာ tab ကိုအတွက်ညာဘက် site ကိုဖွင့်လှစ်။
NOOOOooooooooooooo! STOP ကိုနှိပ်ပါ ငါနောက်သို့နှိပ်ပါ။ UNDO ကိုနှိပ်ပါ။ သွားပြီ
ဒီခဲ့ အ ပို့စ် ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ကိုဘလော့ဂ်ဂါကြယ်ပွင့်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးမည့်အရာဖြစ်သည်။ ငါ့စာအုပ်သဘောတူညီချက်တံဆိပ်ခတ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ trackbacks ရှိမယ့် post ဟာထိပ်ဆုံးမှာပါ digg, ငါ့ကို Technorati ထိပ်တန်း 100 ၌ထားတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်သူကသွားပြီ။
ဒီတော့ဒီမှာ…တစ်ခုတည်းသော browser feature သည်စျေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ Form-on-the-fly-save-and-undo-the-stupid-click-that-I-just-did-that-I-did-not-mean-to-click နှိပ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တွင်နာမည်ကောင်းမရှိသော၊ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်၏တောက်ပသောလင့်ခ်များကိုဖြုန်းတီးခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာတွေဘာလို့ဒီလိုမလုပ်နိုင်တာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ သင်၏ကီးဘုတ်သည်ထည့်သွင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစာလုံးများသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်လာလျှင်၊ ဘာကြောင့် (OH WHY !!!) သည်စာမျက်နှာမတော်တဆပြောင်းလဲမှုမတိုင်မီ ၁.၈ စက္ကန့်၌စာသားနယ်မြေတွင်သင်ရေးသားခဲ့သည်များကိုကွန်ပျူတာအဘယ်ကြောင့်မမှတ်မိနိုင်ပါသနည်း။
ဒီတော့သင် Mozilla, Microsoft, Opera ပါ။ မင်းကိုအမြဲတမ်းချစ်နေစေမယ့်အင်္ဂါရပ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်တစ်စောင်လွှတ်ပေးပါ ကျေးဇူးပြု။
19:2006 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 02
အဲဒါကြောင့် Blogjet ပရိုဂရမ်ကို သုံးပါတယ်။ ဘရောက်ဆာရှိ “ကြို့ထိုးခြင်း” ကြောင့် ပို့စ်များစွာကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
blogjet ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် ထပ်လောင်းအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ သင်၏ hard drive တွင် မူကြမ်းပို့စ်များကို စက်တွင်း၌ သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံများထည့်ခြင်းသည်လည်း လွယ်ကူပါသည်။
အခြားပို့စ်တင်ဆော့ဖ်ဝဲလ် အမျိုးအစားများ ရှိပါသည်၊ ecto ကို သတိရမိသော်လည်း ၎င်းကို ကြည့်ပါ။ Epic ပို့စ်တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းခြင်းသည် ဝင်ကြေးနှင့်ထိုက်တန်ပါသည်။
19:2006 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 06
Blogspot သည် လှပသောကြောင့် မမုန်းပါနှင့်... save- your-work-on-the-fly functionality ကို နှစ်သက်ရမည်...
သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော Google Docs တွင် သင့်ပို့စ်များကို ရေးဖွဲ့နိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 19 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 4:55 နာရီ
Eehm… အဲဒါကို မပွတ်ချင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Opera က Opera7IIRC ကတည်းက ဒီအင်္ဂါရပ်ကို အချိန်အတော်ကြာအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ သင်တက်ဘ်ကိုပိတ်သည်အထိ ဖောင်အကြောင်းအရာကို ကက်ရှ်လုပ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် 'Back' ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ဖောင်အကွက်များ၏ အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသော နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုများ၊ Firefox 2.0 နှင့် MSIE 7.0 တို့သည် တီထွင်သူထံမှ ကူးယူခြင်းကို ယခုပင် ကမ်းလှမ်းသည် 🙂
သင်၏ စာစီစာကုံးအကွက်သည် ကက်ရှ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိနေပါက၊ အထူးသဖြင့် MSIE နှင့် Firefox တို့တွင် အရာများ မှားယွင်းသွားနိုင်သည်။ Opera သည် အနည်းငယ်သာ၍ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး 'Back' ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာကို မကြာခဏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ 19 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 6:32 နာရီ
အဲဒါ ကောင်းမွန်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
တွမ် : ငါ ခြစ်လိုက်ပြီ။ ဘလော့ဂျက်ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ Mac ဗားရှင်းမရှိပါ။ 🙁ဒါပေမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ app လေးတစ်ခုလိုပါပဲ။
William - ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို blogspot မှာရှိနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ အဲဒါကို ကြိုက်ပေမယ့် အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းနည်းရလာတဲ့အခါ၊ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းကို တကယ်လိုချင်တယ်။ Blogger သည် ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ အကြောင်းအရာကို 'ကိုယ်ပိုင်' မလိုချင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အဲဒီအင်္ဂါရပ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိလိုက်ဘူး။ WordPress အတွက် အလားတူလုပ်ဆောင်ချက်ကို ရှာတွေ့နိုင်မလား။
RIJK : ဘယ်သူသိလဲ။ အခုလို မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒေါင်းတော့မယ်။ အော်ပရာ9ငါဘယ်လိုကြိုက်လဲဆိုတာကြည့်!
ဒီဇင်ဘာ 2, 2006 မှာ 1: 04 AM
မင်းရဲ့ပြဿနာအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ငါအကြံတစ်ခုရခဲ့တယ်။ သင်၏သော့ရိုက်ခတ်မှုအားလုံးကိုဖမ်းယူရန် သော့လော့ဂ်ဂါကို သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြီးပြည့်စုံသော ဖောင်တစ်ခုမှ သင်ထွက်သွားသည့်အခါတွင်၊ သင်သည် သင်၏ သော့မှတ်တမ်းဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး သင်ရိုက်ထည့်သမျှကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သည်။
ငါ mac တစ်လုံးရှိဖို့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် မင်းအဲဒါအတွက် အခမဲ့သော့လော့ဂ်ဂါတစ်ခုကို ရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာ ငါသေချာပါတယ်။ ဤသည်မှာ လျင်မြန်သော Google ရှာဖွေမှုမှ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သော တစ်ခုဖြစ်သည်။
(မဟုတ်ဘူး၊ ငါက အဲဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး။)